Renivohitr’izao Tontolo Izao Amin’ny Fanaovana Teny Vary Amin’Anana Ve i Beirut ? · Global Voices teny Malagasy
Renivohitr'izao Tontolo Izao Amin'ny Fanaovana Teny Vary Amin'Anana Ve i Beirut ?
Voadika ny 13 Oktobra 2015 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Ελληνικά, Español, 繁體中文, 简体中文, Esperanto , English
Karatra fandefa paositra ahitàna fifangaroana teny Frantsay, Arabo ary Anglisy, izay mivaky hoe, “Tiako ianao, ry malalako, tiako be.” Hita tao amin'ny Trano fisakafoana Tawlet Souk el Tayeb ao Mar Mkhael, Beirut. Sary an'i Ted Swedenburg, mpampiasa Flickr. CC BY-NC 2.0
Ny 5 Oktobra 2015, nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratra ity sy ny tatitra anaty onjampeo nataon'i Dalia Mortada ho an'ny The World, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Ao amin'ity tsenan'ny tantsaha ao afovoan-tanànan'i Beirut ity, teny vary amin'anana no ifaneraseran'ny mpividy sy ny mpivarotra, mazàna dia Arabo sy Anglisy ary Frantsay.
Raha niezaka fotsiny handoa ny saran'ny zavapisotro nosotroiko aho dia tsy maintsy nisavily avy amin'ny teny Anglisy nankany amin'ny Arabo. Arabo no nanombohan'ilay mpitazona toeram-pivarotana, “Antsika izao,” talohan'ny nivadihana ho amin'ny Anglisy, “ireto [zavapisotro] roa ireto?”
Eny an-tsena miaraka amiko i Pia Bou Khater. Eo amin'ny toerana iray fivarotana zavapisotro, dia mivadi-dela koa izy. “Oh, toa manana vola madinika aho,” hoy izy miteny Anglisy, alohan'ny anohizany amin'ny teny Arabo, “3000.”
Ho an'ny mpitsidika sy ireo Libaney maro dia mampiavaka ny fiainana ao Beirut ny fanaovana teny vary amin'anana tahaka izany.
“Rehefa mifanerasera amin'ny olona aho, ohatra hoe mividy zavatra na miady varotra, dia indraindray ihany vao mivadi-dela,” hoy i Pia manazava. “Matetika aho no miezaka mamantatra ny dikan'ny zavatra iray resahana, toy ny, oh, mitovy amin'ny an'ny teny Anglisy ve izany? Ary dia miainga avy eo ny teny Frantsay,” mihomehy izy, “ary avy eo aho toy ny hoe oh! tsia tsy haiko ny dikany amin'ny teny Frantsay, miangavy atsaharo ity fanasarotan-javatra ity.”
Tsy mahazatra loatra ao Beirut ny hamaroan-teny tahaka izay ahafantaran'i Pia azy. Manao teny vary amin'anana daholo ny maro amin'ny olona saingy amin'ny dingana samihafa, hoy ilay mpahay momba ny teny, Loubna Dimachki. “Teny vary amin'anana, inona no dikany? Rehefa manafangaro teny roa ianao ho anaty fehezanteny iray na ho anatin'ny fifaneraseràna manontolo,” hoy izy, alohan'ny ampiasàny tsy am-pihambahambàna ny teny Frantsay “merci,” mba hisaorana ilay mpandroso sakafonay. Raisina ho “Mpiteny/mampiasa teny Frantsay” i Dimachki — midika hoe, ny Frantsay no teny faharoa mitàna toerana ao aminy.
Saingy tsy izany ihany no antony nampiasàny ny teny “merci”. Ao Libanona, ny arahaba, misaotra anao sy manao ahoana ianao” dia mazàna atao amin'ny teny Frantsay.Teny fototra ny Arabo, saingy any an-tsekoly dia amin'ny teny Frantsay na Anglisy ny ankizy no ampianarina­. Efa nisy hatrany amin'ny 1800 tany ireo sekoly amin'ny teny Frantsay na Anglisy, fony tonga tao amin'ny faritra ireo misionera Katolika sy Anglikàna. Avy eo, taoran'ny Ady Lehibe Voalohany, ny Frantsay no nifehy an'i Libanona hatramin'ny 1940 tany ho any.
Saingy ho an'i Lina Choueri, iray hafa mpahay momba ny teny, dia lazainy fa tsy dia nitranga loatra teo amin'ny fiainana andavanandro ny fanafangaroana ireo teny telo ireto taty aoriana, raha ny marina. “Tsaroako fotsiny izao ny fisiany tamin'izany fotoana ary tezitra mihitsy momba azy io ny raiko,” hoy izy mahatsiahy.
Ny teny Arabo ihany no nifaneraseran'ireo andian-taranaka tamin'ny andron'ny rain'i Choueri. Nanao teny vary amin'anana i Choueri — izay niditra an-tsekoly tany amin'ny taona 80. “Hàlan'ny raiko izy io! Hoy izy hoe, ‘Rehefa manomboka teny iray ianao, dia iny tazonina! Fa tsy misabakabaka mankaminà teny hafa!’”
Hiverenana ny tsena, miombona hevitra amin'ny rain'i Choueri i Pia. Tsy olana ho azy ny tokony hahaizan'ny olona ny Anglisy sy ny Frantsay. “Inona no hitranga raha tsy hainao ireo teny roa fanampiny tonga miasa eto amin'ny firenena? Toy ny fanavakavahana ara-teny izany,” hoy i Pia. Nafàntsika ho ampiasaina nandritry ny fanjanahantany sy ny fibodoana ny teny Anglisy ny Frantsay, ary ny maro hafa koa aza, ary dindon'izany tantara mifamahofaho izany izy ireny.
Saingy aminà zoro hafa no ijeren'i Dimachki ity fivadihan-dela ity. Tokana an-tàny ny fomba fampiasàna teny vary amin'anana ataon'ny olona ao Beirut. Tsy ny taona loatra, na ny foko niaviana, no mamaritra azy hoy izy, ary tsy voafetra ho an'ny tokantrano na ny sekoly na ilay toeram-pivarotana zavapisotro eny an-tsena. Tena eny rehetra eny ny fanaovana teny vary amin'anana. Ny sorabaventy eny an'arabe, dia amin'ny teny Arabo sy Frantsay, matetika ahitàna teny Anglisy ny tranonkalan'ny governemanta. Voasoratra amin'ireo teny telo ireo ny ankamaroan'ny lisitry ny sakafo eny amin'ny toerana fisakafoana, ary renao ny olona manao teny vary amin'anana rehefa mifampiresaka izy samy izy.
Izany no mampiavaka an'i Beirut amin'ireo tanàna hafa toa an'i Barcelona, Jerosalema na Los Angeles. Mety miteny Espaniola ny olona iray ao LA rehefa any an-tranony ary Anglisy rehefa any am-piasàna. Fa ao Beirut, “Libaney daholo izy rehetra, miresaka aminà Libaney, araka izany nahoana no misy ity fanaovana teny vary amin'anana ity?” hoy i Dimachki manontany. “Tsy hahita mihitsy ianao Frantsay anankiroa mifampiresaka amin'ny teny Alemàna na Espaniola na teny Shinoa, raha tsy hoe misy antony manokana angaha. Saingy eto, dia fomba iray ifampiresahana io.”
Mivazivazy ny Libaney hoe io fanafangaroana teny io no “tenindreny ho an'ny Libaney.” “Rehefa manana ‘Tenindreny Libaney’ ianao, dia toy ny hoe ampahany amin'ny maha-ianao anao izany amin'ny lafiny iray,” hoy i Dimachki. ” Nefa izany no antsoinao hoe ampahany amin'ny maha-ianao anao.”
Misy aza T-shirt iray amin'ny tenindreny Libaney : “Hi. Keefak? Ca va?” no misoratra eo — fiarahabàna amin'ny teny Anglisy, Arabo ary Frantsay.
“Fehezanteny safiotra mamintina ny zavatra rehetra” no iantsoan'ny namako, Pia, azy io.
7 andro izayArabia Saodita